Faah-Faahin : Safarka Madaxweynaha Puntland ee Kismaayo – Radio Daljir
Seteembar 12, 2015 1:13 b 0
Sabti, September 12, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Wafdi balaaran oo uu hogaaminayo ayaa si’ weyn loogusoo dhoweeyey magaala madaxda Jubb-Land ee Kismaayo.
Waxaana qayb ka ahaa weftiga uu hoggaaminayo Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Xubno kasocda Labada gole ee Xukuumadda iyo Wakiillada, Saraakiil katirsan Madaxtooyada, Isimo , Cuqaal iyo Aqoonyanno
Ujeedka Safarka Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Wefdiga uu hogaamaaminayo ayaa ah kaqayb galka Caleemo saarka Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo Habeen dambe kadhici doonta Magalaada Kiskaayo ee Xarunta Maamulkaasi.
Garoonka diyaaradaha ee Magaala Madaxda Jubba-Land ee Kismaayo ayaa Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa ku soo dhoweeyey Madaxweynaha Dawlad Gobleedka Jubba-Land Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, Xubno kasocda labadiisa gole, Siyaasiyiin Isimo iyo Qaybaha kala duwan ee Bulshada Rayidka ah oo muddo saacado ah garoonka kusugayey Madaxweynaha iyo weftigiisa.
Intaasi kadib labada madaxweyne ayaa salaan sharaf kaga qaatay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo cutubyo katirsan ciidamada Baambeyda Jubba-Land, waxaana uu madaxweyne Gaas midmid u gacan qaaday dadweynihii goobtaas kusoo dhoweeyey.
Madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa waxaa loosii gelbiyey qasriga madaxtooyada Jubba-land halkasoo ay warfidiyeenada kula hadleen labada madaxweyne.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa uga mahadceliyey Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Jubba-Land iyo shacbiweynaha reer Jubba-land soodhoweynta qiimaha badan ee uu usameeyey isagoona sheegay inay tahay mid ay kulahaayeen, Madaxweynaha ayaa sidookale sheegay Jubba-land maanta inay ka jirto Dawlad taabba gal ah ayna hiil iyo hooba lagarab istaagi doonaan dawladda Curdinka ah ee Jubba-land.
Habeenimada Sabtida ee fooda inagusoo haysa ayaa la filayaa in uu caleema saarka madaxweyne Axmed Madoobe ka qabsoomo gudaha Magalaada Kismaayo.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Sabti_12